By vijayafm on	 April 15, 2019 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
गैंडाकोट । गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ नारायणी नदी किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । विजय विकास स्रोत केन्द्रले २०४६ सालदेखि वृक्षरोपण गरी नारायणीको कटान रोक्नका लागि संरक्षण गर्दै आएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको सार्वजनिक भएपछि अहिले विवाद सतहमा आएको छ । अहिले सो जग्गा भरतपुर महानगरपालिका लङ्कु निवासी केशव सापकोटाको नाममा रहेको सार्वजनिक भएको हो ।
संरक्षित जग्गा कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता रहेको पाइएपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी गैंडाकोट नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बचाउ सङ्घर्ष समितिले सोमबार गैंडाकोट २ बोटेटोलबाट सुरु गरेको ¥याली नगरपालिकामा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा सङ्घर्ष समितिका एक सदस्य एवं स्थानीयबासी लोकबहादुर आलेले भन्नुभयो–“पहिले हामी सोही स्थानमा बस्थ्यौं । अहिले व्यक्तिका नाउँमा सुन्दा अचम्म छौँ ।”
२०३४ सालदेखि आपूmहरु सोही स्थानमा बस्दै आएको आलेले बताउनुभयो ।
गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ नारायणी नदी किनारको सो जग्गा पहिले गौचरण, डु∙ाघाट तथा खेलकुद मैदानका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बोटबिरुवा भएपछि शीतलो पनि हुने, नारायणी नदी तटबन्धनसँगै समुदाय सुरक्षित हुने र काठदाउरा प्रयोग गर्न पाउने भएपछि उनीहरुले सो स्थान छाडेका थिए ।
वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्रमा तारबार गरेको पाइएपछि सो स्थानीयले भत्काइदिएका छन् ।
हाल वृक्षरोपण भएको लगभग ३१–३२ वर्षपछि उल्लिखित सार्वजनिक जग्गामध्येको ठूलो हिस्सा भरतपुर महानगरपालिका बस्ने केशव सापकोटालगायतका व्यक्तिहरुले आनो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हो भनी केही दिन पहिले तारबार गरेको देखिएकाले स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
उक्त गौचरण डुङ्गाघाट तथा खेलकुद मैदान तत्कालीन अवस्थामा अतिक्रमित भएकाले स्थानीय बासिन्दा तथा तत्कालीन गाविसलगायतको पहलमा अतिक्रमित घर परिवारलाई आपसी सहमतिमा नै उक्त स्थल खाली गर्न लगाई खालि गरिएपछि सो जग्गाको संरक्षण गर्न तथा बाढीसमेत नियन्त्रण हुने भएकाले वि.सं. २०४४ सालतिर तत्कालीन विजय युवा क्लब हालको विजय विकास स्रोत केन्द्रलाई वृक्षरोपण गर्न दिइएको थियो । स्थानीयवासी, विभिन्न संघसंस्था तथा टोल विकासको सक्रियतामा सो स्थानमा हरेक वर्ष विजय विकास स्रोत केन्द्रले वृक्षरोपण गर्दै आइरहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बचाउ सङ्घर्ष समितिका संयोजक पूर्णनारायण प्रधानले सार्वजनिक जग्गा, गौचरण डु∙ाघाट तथा खेलकुद मैदान कसरी कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता हुन पुग्यो ? प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो– “रोक्ने काम हामी गर्छौ, जग्गाको खोजीनीति गर्ने, जग्गा बदर गर्ने लगायतका कानुनी काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।”
विजय विकास स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष हरिलाल सापकोटाले विजय विकास स्रोत केन्द्रले २०४६ सालदेखि वृक्षरोपणलगायतका क्रियाकलाप गर्दै आएको बताउनुभयो ।
विजय विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद सापकोटाले गैंडाकोटको एकदमै उपयुक्त स्थानमा रहेको जग्गा भू–माफियाले खान थाले भनेपछि हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको उहाँले बताउनुभयो । विजय विकास स्रोत केन्द्रले सो स्थानको संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले यसका लागि ठुलै चलखेल गरेको देखिएको बताउनुभयो ।
कोणसभामा विजय विकास स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष हरिलाल सापकोटा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बचाउ सङ्घर्ष समितिका संयोजक पूर्णनारायण प्रधानले संयुक्तरुपमा गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेललाई ज्ञापनपत्र पेस गरेका थिए ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख पौडेलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने सुन्नेबित्तिकै खोजीनीति गरेको बताउनुभयो । १५० नम्बर कित्ताबाट ६ वटा कित्ताकाट भएको र २०५५ साल असार ३ गते व्यक्तिका नाममा गएको देखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सो जग्गालाई प्रदेश तहको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बदर गराउन माग गर्दै सो विषयमा जानकारी गराउन मंगलबार नै प्रस्थान गर्ने बताउनुभयो ।
यस्ता सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा नगरका सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाले साथ दिनुपर्ने बताउँदै नगरका सवै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।